လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွင်လက်ဝဲသာလွန်သော parietal ပေါ်၌ရှိသောအမြှေးများ၏အခန်းကဏ္: - FMRI (၂၀၁၂) မှထုတ်ဖော်ပြထားသောကွဲပြားသောအစိတ်အပိုင်းများ၏ဒိုင်းနမစ် - Your Brain On Porn
J ကိုလိင် Med ။ 2012 ဇွန်;9(6):1602-12. doi: 10.1111/j.1743-6109.2012.02719.x.
Cera N ကို1, di Pierro ED, Sepede, G, Gambi က F, Perrucci MG, Merla တစ်ဦးက, Tartaro တစ်ဦးက, del Gratta ကို C, Galatioto Paradiso က G, Vicentini ကို C, Romani GL, Ferretti တစ်ဦးက.
အထီးလိင်စိတ်နိုးထများ၏ဦးနှောက်ဆက်စပ်မှုများအတွက်အကျိုးစီးပွားနေသော်လည်းအနည်းငယ်လေ့လာမှုများအာရုံကြောယန္တရားများနောက်ခံ psychogenic erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED) စုံစမ်းစစ်ဆေး။ ဒီလေ့လာမှုတွေအမြင်အာရုံခေါ်ဆောင်သွားဆွစဉ်အတွင်း ED လူနာအတွက်တက်ကြွစွာအများအပြားဟာဦးနှောက်ဒေသများပြသပေမယ့်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု၏တားစီး၏ဒိုင်းနမစ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူးဖြစ်ပါတယ်။
ဤလေ့လာမှု psychogenic ED တွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဦးနှောက်ဒေသများ၏ဒိုင်းနမစ်စုံစမ်းစစ်ဆေး။
functional သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) နှင့်တစ်ပြိုင်နက် penile tumescence (PT) ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုလေ့လာဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည်အမြင်အာရုံခေါ်ဆောင်သွားဆွစဉ်အတွင်း psychogenic ED နှင့် 17 ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူ 19 ပြင်ပလူနာအတွက် evoked ။ နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်နှစ်ခုအုပ်စုများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုအမျိုးမျိုးအဆင့်နှင့်ဆက်စပ်သောဦးနှောက်ကို Activation ပုံစံများ။
အမြင်အာရုံခေါ်ဆောင်သွားဆွကာလအတွင်းအသွေးတော်အောက်စီဂျင်အဆင့်ကို-မှီခို fMRI တုံ့ပြန်မှုများနှင့် PT ၏တစ်ပြိုင်နက်မှတ်တမ်းတင်။
ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုကိုညာဖက်အလယ် insula နှင့် dorsal anterior cingulate cortex နဲ့ hippocampus အတွက်ပိုကြီး activation ပြသသော်လည်းအမြင်အာရုံခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုစဉ်အတွင်းပိုကြီးတဲ့ activation, လက်ဝဲသာလွန် parietal ပေါ်၌ရှိသောအမြှေး, ventromedial prefrontal cortex နှင့် posterior cingulate cortex အတွက်လူနာအုပ်စုလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထိုမှတပါး, ဘယ်ဘက်သာလွန် parietal ပေါ်၌ရှိသောအမြှေး, အထူးသဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများ၏နောက်ပိုင်းတွင်ဇာတ်စင်စဉ်အတွင်းထိန်းချုပ်မှုထက်လူနာပိုကြီးတဲ့ activation ပြသခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုလူနာအုပ်စုတွင်ပိုမိုတက်ကြွစွာဒေသများအကြား, ဘယ်ဘက်သာလွန် parietal ပေါ်၌ရှိသောအမြှေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု၏တားစီးအတွက်အလွန်အရေးပါအခန်းကဏ္ဍ, ထိုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ယခင်လေ့လာမှုများလက်ဝဲသာလွန် parietal ပေါ်၌ရှိသောအမြှေးပြည်တွင်းရေးခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်စားပြုမှု၏စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုနောက်ပိုင်းမှာအဆင့်စဉ်အတွင်းလူနာတွေကို၌ဤဒေသ၏ပိုကြီးတဲ့ activation ဖြစ်နိုင်သည်အပြုအမူတုံ့ပြန်မှုထိခိုက်, အတွင်းပိုင်းကိုယ်ထည်ကိုယ်စားပြုမှု၏မြင့်မားသောစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုအကြံပြုထားသည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် psychogenic ED တွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဦးနှောက်ယန္တရားအပေါ်ထိုးထွင်းသိမြင်သည်။